DHEGEYSO-Dhalinyaro falal anshax xumo ah kawadey Galkacyo oo xukumo lagu ridey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dhalinyaro falal anshax xumo ah kawadey Galkacyo oo xukumo lagu ridey.
Febraayo 6, 2017 3:36 b 0
Galkacyo, Feb 06 2017-Ciidamada amniga Puntland ee ka howlgalla magaalada Gaalkacyo ayaa xalay gudaha u galay guri kuyaala magaalada Gaalkacyo oo ay ku aruursanayeen kooxo dhalinyaro oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaas oo sameynayay falal anshax xumo ah.
Dhalinyaradaani ayaa maxkamad la horkeenay waxaana lagu ridey xukun saddex bilood oo xabsi ah iyadoona loo samayn doono dhaqan celin mudada ay xabsiga kujiraan.
DHEGEYSO-Labo ruux oo harraad ugu dhintay koonfurta Gobolka Mudug
DHEGEYSO-Labo ruux oo harraad ugu dhintay koonfurta Gobolka Mudug.